Ungalongeza njani ulwandiso lweChannel kwiMicrosoft Edge Chromium | Iindaba zeGajethi
IMicrosoft isungule iMicrosoft Edge nge Windows 10, isikhangeli esize nombono wokwenza iInternet Explorer ilibale, isikhangeli eso walawula ngesandla sesinyithi ukusuka kwi-90s ukuya kwi-2012, xa iGoogle Chrome yaba sesona sikhangeli sisetyenzisiweyo kwihlabathi elidlula i-Internet Explorer.
Njengokuba iminyaka ihambile, ulawulo lwe-Chrome luyaqhubeka kwaye ngoku lufumaneka phantse kwiikhompyuter ezi-3 kwezi-4 eziqhagamshela kwi-intanethi ngesikhangeli. Nge-Edge, iMicrosoft ayifuni kuphela ukuguqula iphepha nge-Intanethi Explorer, kodwa ikwafuna yima uye kwiChannel. Kodwa akazange aphumelele.
Njengoko iminyaka ihamba, iMicrosoft yaqonda ukuba kukho into engalunganga. Eyona ngxaki iphambili uEdge asinike yona, asifumananga kuphela ekusebenzeni kwayo, kodwa nakwifayile ye- ukungabikho kolwandiso. Ngelixa kuyinyani ukuba iEdge yayihambelana nolwandiso, inani lazo lalinqunyelwe, lilinganiselwe kakhulu xa sithelekisa nenombolo efumaneka kwiChannel.
Esona sisombululo yayikukwakha isikhangeli esitsha ukusuka ekuqaleni, isikhangeli esisekwe kwiChromium, injini enye ekhoyo ngoku kuzo zombini i-Chrome kunye ne-Opera kuba zombini iFirefox kunye neApple's Safari zisebenzisa iGecko.
NgoJanuwari 2020, uMicrosoft wakhupha ingxelo yokugqibela yeEdge entsha, isikhangeli esibonisa indaleko ebaluleke kakhulu xa kuthelekiswa nohlobo lwangaphambili. Ayisiyiyo nje kuphela ukuba iyakhawuleza, kodwa ikwabonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuthintela ukulandela umkhondo wethu kunye iyahambelana nazo zonke izandiso esinokuyifumana ngoku kwifayile ye- Ivenkile yeWebhu yeChannel.
1 Uyifaka njani iMicrosoft Edge Chromium
2 Faka ulwandiso kwiMicrosoft Edge
3 Faka ulwandiso lweChannel kwiMicrosoft Edge Chromium
4 Ungasusa njani ulwandiso kwiMicrosoft Edge Chromium
Uyifaka njani iMicrosoft Edge Chromium
Ukuba yinguqulelo entsha yeMicrosoft Edge, isikhangeli esidityanisiweyo Windows 10, ukuba uhlaziye ikopi yakho Windows 10, ngokunokwenzeka ukuba sele uyifakile kwikhompyuter yakho. Ukuba akunjalo, ungadlula ikhonkco elisemthethweni kuphela Ukuyikhuphela ngesiqinisekiso esipheleleyo, ikhonkco esilifumana kwiphepha elisemthethweni likaMicrosoft.
Ukusuka kwikhonkco, unokuzikhuphelela zombini ingxelo Windows 10, kunye Inguqulelo yeWindows 7 kunye neWindows 8.1 kunye nohlobo lweMacOSKuba olu hlelo lutsha lwe-Edge luyahambelana nazo zonke iinkqubo zokusebenza kwedesktop kule minyaka ili-10 idlulileyo.
Kwaye xa ndisithi igosa, ndithetha ukuba kufuneka Lumka kuwo onke amaphepha ewebhu athi asivumele ukuba sikhuphele iMicrosoft Edge kwiiseva zabo, ngokungathi ngabanini besoftware. Kuya kufuneka sikrokrele kuba i-99% yexesha, isoftware yokufaka ibandakanya usetyenziso lomntu wesithathu oluya kufaka ukuba asifundanga onke amanyathelo ekufuneka elandelwe ngexesha lofakelo.
Faka ulwandiso kwiMicrosoft Edge
IMicrosoft isinika uthotho lwezandiso zayo ezihamba nokuqaliswa kwenguqulelo entsha yeEdge esekwe kwiChromium, izandiso esinokuzifumana kwiVenkile kaMicrosoft. Ukufikelela kwisikhangeli, kufuneka singene kukhetho loqwalaselo ngokunqakraza kumanqaku amathathu athe tye akwikona ephezulu ngasekunene kwesikhangeli kunye nokukhetha izandiso.
Ukufikelela kwisikhangeli ngokwaso ukuya kwicandelo leMicrosoft Store apho kufumaneka khona izandiso, kufuneka siye kwikholamu yasekhohlo kwaye ucofe Fumana izandiso kwiVenkile kaMicrosoft.
Ke lonke ulwandiso olufumaneka ngokuthe ngqo kwiMicrosoft luza kuboniswa, ulwandiso olo balupasile ukhuseleko Ukusuka kwiMicrosoft, njengazo zonke usetyenziso ezikhoyo kwivenkile yesicelo yeMicrosoft. Kwikholamu yasekhohlo, sifumana iindidi zezicelo ngelixa kwikholam yasekunene ehambelana nenye nganye ibonisiwe.
Ukufakela naluphi na ulwandiso, kufuneka ucofe igama lalo, kwaye cinezela Fumana iqhosha ukuze ifake ngokuzenzekelayo kwikopi yethu yeMicrosoft Edge Chromium. Nje ukuba ifakiwe, njengoko kunjalo kuzo zombini i-Chrome kunye neFirefox kunye nezinye iibrawuza zivumela ukufakelwa kwezandiso, i icon yayo iya kubonakala ekupheleni kwebar yokukhangela.
Faka ulwandiso lweChannel kwiMicrosoft Edge Chromium
Ukuze ufake ii-Chrome extensions kwiMicrosoft Edge entsha, kufuneka singene kuqala kwifestile enye apho sinokufaka khona izandiso esizifumana kuMicrosoft. Kwindawo esezantsi ekhohlo yale festile, kufuneka senze utshintsho Vumela izandiso kwezinye iivenkile.
Nje ukuba sikwazi ukwenza olu khetho, singaya kwifayile ye- Isitolo sewebhu se-Chrome ukufumana nokufaka izandiso esifuna ukuzisebenzisa kwikopi yethu esekwe kwiChromium yeMicrosoft Edge.
Kule meko, siya kuqhubeka ukufaka ulwandiso I-Netflix Party, ulwandiso olusivumela ukuba sonwabele umxholo ofanayo weNetlix kunye nabahlobo bethu ngaphandle kokuba kwindawo enye. Nje ukuba sikwandise iphepha, cofa ku Yongeza kwiChannel kunye siqinisekisa ufakelo. Nje ukuba ifakwe, siya kuyifumana ekupheleni kwebhokisi yokukhangela. Akukho mfuneko yokungena ngeakhawunti yethu kaGoogle ukufaka ulwandiso kwiEdge Chromium.
Ungasusa njani ulwandiso kwiMicrosoft Edge Chromium
Ukuphelisa izandiso ebesizifakile ngaphambili kwiMicrosoft Edge, kufuneka singene kukhetho lokumisela kwaye singene kwicandelo lezandiso. Kweli candelo, Zonke izandiso ebesizifakile ngaphambiliNokuba lolwakhiwo okanye ulwandiso oluvela kwiVenkile yeWebhu ye-Chrome.
Inkqubo yokubasusa kwikhompyuter yethu iyafana, kuba kufuneka siye kuphela kulwandiso ukuphelisa kunye cofa ku Susa (ibekwe nje ngezantsi kwegama lolwandiso) eqinisekisa ukususwa kwinyathelo elilandelayo. Olunye ukhetho esinikwa yi-Edge Chromium kukususa ulwandiso.
Ukuba senza kungasebenzi, oku kuyayeka ukusebenza kwisikhangeli sethu, i icon yayo ayizukuboniswa ekupheleni kwebhokisi yokukhangela, kodwa isaza kufumaneka ukuyenza isebenze xa siyifuna. Olu khetho lufanelekile ukuvavanya ukuba naluphi na ulwandiso esisandul 'ukulufaka kwikhompyuter yethu ngunobangela weengxaki ezizisiweyo.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nenkqubo, ungathandabuzi ukuyishiya kumagqabantshintshi nangolonwabo Ndiza kukunceda uzisombulule.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » Ungalongeza njani ulwandiso lweChannel kwiMicrosoft Edge Chromium